Sawiro+Akhriso Mujaahidiinta Al-qaacidah Oo Sheegtay Weerar Ka Dhacay Dalka Maali. – Bogga Calamada.com
Sawiro+Akhriso Mujaahidiinta Al-qaacidah Oo Sheegtay Weerar Ka Dhacay Dalka Maali.
Faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar Saddex Maalin ka hor xilli aroor ah lagu qaaday saldhig ciidan oo maamulka daba dhilifka dalka Maali uu ka sameysten Waqooyga dalkaasi.
Weerarka waxaa si gaar ah loogu qaaday saldhiga ciidamada dowlada daba dhilifka Maali ee deegaanka Sumby ee gobalka Tombuktu ee Waqooyga dalkaasi.
Weerarkaasi culus waxaa lagu dilay Tobaneeyo ka tirsan maleeshiyaatka Xukuumada Maali,iyadoona dadka deegaankaasi ay sheegeen in weerarkaasi lagu dilay Afar iyo Toban askari.
Ragga weerarka culus ku qaaday saldhigaasi ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku heynta saldhiga taasi oo muujineysa in dowlada daba dhilifka Maali khasaara culus oo naf iyo maal ah lagu gaarsiiyay dagaalkaasi.
Mas’uuliyadda weerarkaasi culus ee ka dhacay Waqooyga dalka Maali waxaa sheegtay Mujaahidiinta Jamaacada U Gargaaridda Islaamka iyo Muslimiinta oo ah Jamaaco ka Jihaada dalka Maali iyo dalalka dariska la ah waana Mujaahidiin Taabacsan Mujaahidiinta Al-qaacidah ee dhulka Bilaadul Magribil Islaam.
Mu’asasada Az-zallaaqah ee garabka warbaahineed ee Mujaahidiinta Jamaacada U Hiilinta Islaamka iyo Muslimiinta ayaa baahisay war rasmi ah oo kasoo baxay Jamaacada kuna sheegatay Mas’uuliyadda Weerarka askarta faraha badan lagu dilay ee ka dhacay Waqooyga Maali.
Qoraalka ayaa lagu xusay in weerarka ay fuliyeen Sariyo ka tirsan Ciidanka Mujaahidiinta Jamaacada U Gargaaridda Islaamka Iyo Muslimiinta islamarkaana weerarkaasi lagu dilay Tobaneeyo ka tirsan maleeshiyaatka maamulka Ridada Maali ugu dambeyntiina ciidamada Mujaahidiinta ay la wareegeen gacan ku heynta saldhigaasi.
Mu’asasada Az-zallaaqah ayaa sidoo kale baahisay Sawirada Shan gaari oo qaarkood ay ku rakibanyihiin Lidka Diyaaradaha oo dagaalkaasi looga soo furtay maleeshiyaatka maamulka daba dhilifka Maali,sidoo kale Sawirada waxaa qeyb ka ah sanaadiiq Rasaas ah iyo Hub kala duwan oo ciidamada Mujaahidiinta ay kasoo qaniimeysteen saldhigaasi.
Dhanka kale Mu’asasada Az-zallaaqah waxey baahisay magacyada Afar Mujaahid oo qeyb ka ahaa ciidamadii weeraray saldhiga kuwaasi oo shahiiday intii dagaalka uu socday waxeyna kala yihiin magacyada raggaasi Shahiiday Allaah Shahaadadooda haka wada aqbalo.
Mujaahidiinta Jamaacada U Hiilinta Islaamka iyo Muslimiinta ayaa mudooyinkii dambe sii kordhisay weerarada ka dhanka ah gaalada iyo daba dhilifyadooda ee ay ka fulinayaan gudaha dalka Maali iyo dalalka dariska la ah dalkaasi.
Halkan Ka Akhriso Qoraalka Jamaacada Kasoo Baxay.
Halkan Hoose Ka Daawo Sawirada Hubka Iyo Gaadiidka Ganiimada Ah.